The louis vuitton smartwatch bụ ugbu a ukara ezie na ya price bụ nke apụghị iru nke fọrọ nke nta ka onye ọ bụla | Akụkọ akụrụngwa
Ahịa smartwatch na-aga n'ihu na-eto eto na oge, na ngosipụta nke ọtụtụ ngwaọrụ na ọnọdụ ahụ na ntinye nke ụdị, anyị nwere ike ịsị na a na-ekwu banyere ụdị ọ bụla. Otu nke ikpeazụ dịka ọmụmaatụ bụ Luis Vuitton onye gosipụtara igwe elekere ọhụụ ya, nke dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ọ na-ere, ọ dị mwute ikwu na ọ gaghị enwe ọnụahịa n'ime iru akpa ọ bụla.
Ma nke ahụ bụ ihe ọhụrụ Tambour Horizon see ahịa na a ego nke $ 2.450, na-echekwa usoro nke ụdị Tambour a ma ama, ọ bụ ezie na ọ nwere nnukwu uru nke inwe ike ijikọ ya maka sistemụ arụmọrụ Android Wear 2.0.
Dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo ahụ na vidiyo dị n'isiokwu a, smartwatch enweghi ihe ọ bụla iji bụrụ ihe dị mkpa na nkwojiaka gị. Na ọkwa nke njirimara, anyị na-ahụ a 42-millimita sapphire kristal okirikiri ngosi AMOLED, ya na igwe anaghị agba nchara. Ya processor bụ Snapdragon Wear 2100 nke bụ otu n'ime ndị kasị hụrụ na ụdị ngwaọrụ.
Ọnụ ya, dị ka anyị kwurula na mbụ, bụ euro 2.450 maka ihe nlereanya kachasị dị na ya nke nwere igwe anaghị agba nchara, ụdị ojii nke otu ihe ahụ ruru euro 2.900.
Obi abụọ adịghị ya na anyị na-eche nche elekere ga-enwe ebe dị mkpa n'ahịa, mana n'ịhụ ọnụ ahịa ya, a ga-edebe ebe a maka obere akpa nwere ike imefu puku puku euro na elekere.
Kedu ihe ị chere maka Tambour Horizon ọhụrụ nke Luis Vuitton?. Gwa anyị na oghere edebere maka nkọwa nke ntinye a ma gwa anyị ma ọ bụrụ na ị ga - emefu ihe karịrị puku euro abụọ iji nweta smartwatch dị ka nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Louis vuitton smartwatch adịworị gọọmentị ọ bụ ezie na ọnụahịa ya enweghị ike iru onye ọ bụla